I-Indiana: Inkulumbuso yeNtengiso yeHlabathi | Martech Zone
I-Indiana: Inkulumbuso yeNtengiso yeHlabathi
NgoLwesibini, Septemba 21, 2010 NgeCawa, ngoFebruwari 9, 2014 Douglas Karr
TechPoint yazisa ngokusesikweni Inyathelo lokuThengisa eliMiselweyo laseIndiana, Iphulo lobudlelwane kwimidiya yosasazo lokubeka iIndiana njengenkokeli yenqanaba lokukhula ngokukhawuleza, kwitekhnoloji yeshishini elenzelwe yiTechPoint ukuthengisa okulinganisiweyo.
Iinjongo zoPapasho olulinganisiweyo:
Yonyusa ulwazi lokuba lo mmandla uphuhlisa ezinye zeemveliso eziphambili kunye nemibutho yeenkonzo elizweni xa kusenziwa iinzame zokuthengisa kunye netekhnoloji.
Yenza abathengi kumashishini akhoyo ngokwenyusa kuzwelonke. Oku, kuya kuthi kusincede siqhubeke nokufumana abafundi abanezakhono kwizikolo zaseIndiana kwaye siqhubeke nokukhulisa amathuba engqesho namashishini.
Ukutsala iinkampani ukuba zenze imisebenzi kunye notyalo mali eIndiana. I-Indiana ihlala iqondwa njengelinye lawona mazwe afikelelekayo kwizidanga zekholeji. Urhulumente wethu ukwimo entle yezemali kwaye iindleko zethu eziphantsi zokuphila zenza ukuqala amashishini kungabizi kakhulu-ukubonelela ngamathuba angcono okuphumelela kunye nokukhula.
Ndikunye noChris Baggott, ndiyazingca ngokuba ndiyinxalenye yeli phulo ukusuka kwinqanaba lokuqala. Ndiyamncoma uJim Jay kunye namaqela eTechpoint naseBhola State. Benze umsebenzi omangalisayo ekuphuhliseni nasekutyhaleni eli nyathelo.
Inyathelo lokuThengisa elilinganisiweyo laseIndiana
Yintoni ukuthengisa okulinganisiweyo? Ukuthengisa okulinganisiweyo yitekhnoloji yeshishini micocluster ejolise kuphuhliso lwezixhobo kunye nezicwangciso zamashishini zokusebenzisa idatha ukuphucula okanye ukulungelelanisa iinzame zabo zokuthengisa kubathengi nakumashishini.
Yintoni inkampani yokulinganisa elinganisiweyo? Iinkampani zokulinganisa ezilinganisiweyo zibonelela ngeqonga okanye inkonzo yentengiso yedijithali nge-imeyile, imidiya yoluntu, ukukhangela, ividiyo, iselfowuni kunye nobunye ubuchwephesha obuvela ngokukhawuleza, kwaye banikezela abathengi ukulandelela ukubuyela kutyalo-mali. DK New Media inebhongo ngokuba yinkampani embindini wale microcluster eguqukayo.
Kutheni le nto i-Indiana ingumdlali ophambili kushishino lokulinganisa olulinganisiweyo? Engaphezulu kwe Iinkampani ezingama-70 ezilinganisiweyo zokuthengisa fowunela ilizwe lase-Indiana ikhaya, kwaye ngokusekwe kwidatha ekhoyo, icandelo lase-Indiana likhule Iipesenti ezingama-48 ngaphezulu kolunye uhlanga.
Ke-ukuba ungumfundi wasekholejini, ishishini elinqwenela ukuthatha inxaxheba, ishishini lobuchwephesha kwezentengiso elijolise ekufuduseleni kumathuba angcono, okanye kwinkampani eyinkunzi yokuzibandakanya ejonge ukutyala imali…. gcina amehlo akho ejongiwe kugqatso lukazwelonke kwiNkqubo yokuThengisa yokulinganisa yaseIndiana!
tags: Yongezaamazon sesIntengiso ye-facebookUsetyenziso lwe-facebookukwenziwa kwemizoboixabiso eliphantsiInkcitho kwintengiso ye-twitterUkujolisa kwimozulu